केही दिनभित्रै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ : तामाङ
५ जेष्ठ २०७९ बिहीबार | 19th May, 2022 Thu
श्रावण २० गते, २०७८ बुधवार
4th August, 2021 Wed ०९:४७:४८ मा प्रकाशित
प्रतिगमनलाई परास्त गरी विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न हामी सफल भएका छौँ । ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान, राष्ट्रियता र व्यवस्थामाथि नै निर्मम प्रहार गरिरहेको अवस्थामा सबैको सहकार्य र सहयोगमा संविधान र लोकतन्त्र ठीक बाटोमा आएको छ । अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या कहाँ पर्‍यो भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच साझा नीति तथा कार्यक्रम तय हुन सकिरहेको छैन । यो सरकारलाई स्पष्ट ढंगले अगाडि बढ्न सजिलो होस भन्‍नका लागि रोडम्यापको रुपमा साझा नीति तथा कार्यक्रम दिनुको साथसाथै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन जरुरी छ । पहिलो सत्ता गठबन्धनबीच कसले कति संख्या पाउने र कुनकुन मन्त्रालय पाउने भन्‍नेमा स्पष्ट खाका आइसकेको छैन । यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही ढिलाइ भएको छ । दोस्रो कुरा हिजो प्रतिगमन सच्याउने क्रममा सहभागी नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहको व्यवहारिक खालको समस्या देखा परिरहेको छ । माधव समूह अब कसरी जान्छन् भन्दा पनि आजसम्मको स्थितिमा सरकारमा जाने नजाने भन्‍नेमा स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन् । कहिले सरकारमा जान्छौं भनिरहेका छन् त कहिले पार्टी एकताको विषयमा छलफल चलिरहेकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । उहाँहरूको आन्तरिक समस्या हल नहुँदा केही समस्या उत्पन्‍न भएको छ । हामीले सरकारमा जाने भए मन्त्रिहरूको नाम दिनोस् भनेको छौं । नजाने भए सहभागी हुँदैनौं भन्‍ने कुरा स्पष्ट रुपमा आउनुपर्छ ।
यसैगरी हाम्रो दलभित्र पनि मन्त्री बन्‍ने आकांक्षिहरू धेरै छन् । सरकारमा जान आकांक्षा देखाउनु स्वभाविक नै हो । तर, यसले मात्रै सरकार विस्तार गर्न अवरोध भएको मान्‍न मिल्दैन । त्यो भन्दा पनि सरकारमा कुन दल जाने ? कुन दल नजाने ? साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम कसरी ल्याउने ? कसलाई कति मन्त्रालय दिने भन्‍ने बारेमा सहमति हुँदा साथ समस्याको हल हुन्छ । माधव समूहको समस्या हल हुने वित्तिकै कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने अनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्‍ने कुराको हल भइहाल्छ नि । यस हिसाबले मेरो विचारमा अब दुई तीन दिनभित्र नै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ । हाम्रो पार्टीभित्र पनि मन्त्रिमण्डलमा पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पार्टीको आन्तरिकरुपमा पद, भागबण्डाको कारणले समस्या आएको भन्दा पनि कुन दलले कुन-कुन मन्त्रालय पाउने र साझा नीति तथा कार्यक्रम कसरी ल्याउने भन्‍ने विषयमा सहमति हुँदासाथ सबै कुराको हल हुन्छ । यस विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्व बसेर तत्काल टुंग्याउनु पर्छ ।
(तामाङ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्)
Khabardabali Desk–JK का अरु लेखहरु पढ्नुस्
कार्तिक १७ गते, २०७८ - २०:०७
६६ लाख मूल्यको अवैध सामान बरामद
बुटवल । रुपन्देही प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ठूलो मात्रामा अवैध सामान बरामद गरेको छ । प्रहरीले ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भन्सार छलीको साम...
कार्तिक १७ गते, २०७८ - १९:५५
लोकल रक्सी पोख्ने विदेशी दलाल हुन् : उषाकला राई
खोटाङ । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा लोकल मदिरा पोखेर नष्ट गरेको घटनाप्रति ‘ब्यान्ड भर्सेस ब्राण्ड’की अभियन्ता एवं पूर्वमन्त्री उषा...
कार्तिक १७ गते, २०७८ - १९:२६
किमाथांका नाका र अरुण करिडोर सरकारले चाँडै सञ्चालनमा ल्याउँछ : अर्थमन्त्री शर्मा
संखुवासभा । अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ले संखुवासभाको किमाथांका नाका र अरुण करिडोर चाँडै सञ्चालनमा ल...
कार्तिक १७ गते, २०७८ - १८:४७
प्रधानन्यायाधीश प्रकरण : एमालेनिकट कानुन व्यवसायी संगठनमा लफडा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेनिकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठनमा विवाद भएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले न्यायाधीशहरु काममा फर्किनुपर्...
कार्तिक १७ गते, २०७८ - १८:४०
न्यायालयको निकास न्यायालयले नै खोजोस् : महत
फुङ्लिङ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अहिले सर्वोच्चमा अदालतमा देखिएको समस्याको समाधान सर्वोच्चमै खोज्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधा...
कार्तिक १७ गते, २०७८ - १८:२१
जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रमुख सचिवसहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग प्रदेश सरकारका काम कारबाहीका विषयमा छलफल गरेका छन...
कार्तिक १७ गते, २०७८ - १७:४४
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणले यस्तो दिए जवाफ
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विवेक हेर्न मन भए फैसला पल्टाउन चुनौती दिएका छन् । काठमाडौंमा बुधवार आयोजित एक...
कार्तिक १७ गते, २०७८ - १६:३९
४४७ जनालाई कोरोना, ७ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ४४७ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ । ६ हजार ५ सय ७७ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ३९५ जना र ३ हजार ३ सय ३...
कार्तिक १७ गते, २०७८ - १६:२३
कांग्रेस एक्लै लडेर एमालेलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हराउँछ : गगन थापा
भक्तपुर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले नेकपा (एमाले)ले चाहेको जस्तो अर्ली इलेक्सन अहिले असम्भव भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्...
कार्तिक १७ गते, २०७८ - १६:०७
यसरी छानिँदैछन् कात्तिक २७ गते एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि यही २७ कात्तिकमा एकै दिन छानिँदै छन् । एमाले प्रचार विभागले १०औँ महाधिवेशनका विषयमा जानकारी द...
विवाद छ तर १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन हुन्छ- ज्ञवाली
एमालेमा अझै मतभेद छ भन्नु २०० प्रतिशत झुट कुरा हो- नेम्वाङ
पहिलाको होइन, माओवादीसहितको नयाँ विकसित एमाले हो- थापा
बागलुङको दुई पालिकाको नेतृत्वमा महिला
धनुषाको कमला नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा कांग्रेस विजयी
व्यास नगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र र उपप्रमुखमा एमालेको अग्रता
कैलारीमा कांग्रेसका चौधरी निर्वाचित